Kacdoon ka Dhashay Dhallinyaro Lagu Dilay Gaalkacayo. | Raadreeb
Kacdoon ka Dhashay Dhallinyaro Lagu Dilay Gaalkacayo.
Dibad baxayaasha ayaa waxa ay codsanayeen in caddaalada la hor keeno dadkii dilka geystay, iyo in wax laga qabto adeeg la’aanta caafimaadka magaalada, taas oo ay sabab uga dhigeen in uu dhaawicii u geeriyoodo Xaamid.
Waa kuma Xaamid:-
Saxafi Siciid oo ka hadlaya aqoontii uu u lahaa Xaamid ayaa yiri “Waxaan xusuustaa safar dalxiis ah oo aan isu raacnay magaalada Gaalkacayo, runtii waxaanan marnaba halmaami doonin wanaaggiisa iyo sidii uu dhallinyaradii kale ula dhaqmayay” . Wuxuu intaas ku daray in dhallinyarada magaalada uu ka baxay shaqsi ay adagtahay in booskiisa la buuxiyo.
Adeegga Caafimaadka Gaalkacayo:-
“Eedeymo badan ayaa jira, isbitaalka weyn dawooyinkiisa waa la iibsadaa, dhaqaatiirta waxa ay leeyihiin xarumo u gaar ah, ma jiro wax la xisaabtan ah, dad badan ayaana dhibbane u noqday arrinkan” ayuu yiri saxafi Siciid.
Ma jirto qof illaa iyo hadda mas’uuliyiinta Puntland ay u qabteen dilka wiilkan , waxaase jira warar ka hadlaya in la aqoonsaday askarigii rasaasta furey, kaas oo la sheegay in uu u baxsaday magaalada Bacaad Weyn, balse raadkiisa lagu joogo.